Imandarmedia.com: यस्तो अच्चम्म ? काँग्रेसको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा, माओवादीको रुख !
Main News, Newspaper » यस्तो अच्चम्म ? काँग्रेसको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा, माओवादीको रुख !
यस्तो अच्चम्म ? काँग्रेसको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा, माओवादीको रुख !
चार तहका दुई स्थानमा प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख माओवादी तथा दुई तहका प्रमुखमा माओवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेस हुने सहमति अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गरेर यी दुवै पार्टीले निर्वाचन प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
तर, चारै तहमध्ये मालारानी गाउँपालिकामा भने कांग्रेस र माओवादीबीच गज्जबको तालमेल भएको छ । प्रमुखमा माओवादीबाट पदम क्षेत्री र उपप्रमुखमा कांग्रेसबाट शान्ता खनाल संयुक्त रुपमा चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् ।
प्रमुख र उपप्रमुख मात्र होइन, वडा तहमा पनि कांग्रेस र माओवादी एक भएर एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्दै छन् । ९ वटा वडा रहेको मालारानी गाउँपालिकामा तीन वडामा कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख र ६ वडामा माओवादीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हसियाँ हथौडामा चुनाव लडेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाटमा खबर छ ।